Qaramada Midoobey oo 4 Milyan Carruur Somali ah ka daweyneysa Jadeecada | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Qaramada Midoobey oo 4 Milyan Carruur Somali ah ka daweyneysa Jadeecada
Qaramada Midoobey oo 4 Milyan Carruur Somali ah ka daweyneysa Jadeecada
Hay’adaha Caafimaadka ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in ay billaabayaan olole ka dhan ah cudurka Jadeecada oo ujeedadiisu tahay in lagu gaaro 4.2 Milayn oo Carruur Soomaali ah.
Hay’adaha Unicef iyo WHO ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in Bisha November ee sanadkan ay billaabayaan ololaha ka hortagga Cudurka Jadeecada kaas oo lagu baabi’inayo cudurkaas oo faro ba’an ku haya Soomaaliya.
Waxaa ay labada Hay’adood oo iskaashanaya sheegeen in Carruurta Cudurkan laga daweynayo ay da’dooda ka billaabaneyso 6 jir ilaa 10 Sano jir.
Warbixin ay wadajir u soo saareen ayey ku sheegeen in Soomaaliya Sanadkan 2017 kaliya laga soo wariyay in ka badan 14,000 kiis oo Cudurka Jadeecada ah islamarkaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badanw ax looga qabto fiditaanka Jadeecada.
Dhanka dhaqaalaha ayey sheegeen in $14 Milyan oo doollarka Mareykanka ah loo baahan yahay si looq abto shaqada iyaga oo intaas ku daray in WHO kaligeed ay u baahan tahay $7 Milyan oo doollar.
Warbixinta waxaa lagu xusay in 80% Dadka uu ku dhacay Cudurka Jadeecada ee ka jira Soomaaliya ay da’doodu ka yartahay 10 Sano,taasna muujineyso sida Carruurta Soomaaliya ugu nugulyihiin Cudurka Jadeecada.
Hay’adaha WHO iyo UNICEF oo iskaashanaya waxaa ay billowgii 2017ka Cudurka Jadeecada ka tallaaleen Carruur gaareysa 596,328 oo ay da’doodu u dhaxeyso 6 bilood ilaa 5 Sano.